Mifananidzo yepakutanga Apple Watch prototype inosvinwa | Ndinobva mac
Mifananidzo yepakutanga Apple Watch prototype yakaburitswa
Nguva yakareba yapfuura kubvira apo Apple yakazivisa icho chakazove chishandiso chakakosha kwazvo cheApple. Kuchengetedza iyo iPhone, iyo Apple Watch yave dhivhosi yeApple. Kwete chete padanho rekutengesa iro rakawana iwo akanakisa mhedzisiro, asi mune yega yega yekuvandudza inoratidza izvo zvainokwanisa. Zvino Tinogona kurangarira maitiro ekutanga Apple Watch yaive mune yayo prototype state thanks to @AppleDemoYT
Yekutanga Apple Watch payanga ichiedzwa, yakatumirwa kune avo vane rombo rakanaka mukati mekesi yesilicone kuti vadzivirire kubva kune vanoona vanoda kuziva uye kubva pamabumpump kana kudonha kwaangatambura, kuwedzera ipe kutarisa kunoshanda sezvo yanga isina kutumirwa nemabhande, saka mashandisiro ayo aive akaomarara.
Pamwe chete neApple Watch akateedzana mapepa akange achifanirwa kuverengerwa nenjere varidzi uye ndopawakaona kuti wanga uchitarisana nechinhu chakakosha kubva kuApple Mapako mazhinji zvekushandisa zvisina kukodzera kwechigadzirwa uyezve zvakawanda nezvebasa rekuvanzika pamberi pezvauri kuyedza.
Prototype Apple Watch (Yekutanga) ine inoenderana Yekuchengetedza Kesi uye bhokisi. Iyo Yekuchengetedza Kesi yakashandiswa kuviga dhizaini isati yaburitswa yekudzosera kutakura; uye inoita kuti iyo Watch iratidzike yakafanana nePod Nano. #appleinternal pic.twitter.com/2q0y8l6oso
Kuuya mukati mekesi iyo yatinoona mumufananidzo, vamwe vakataura kuti inoratidzika kunge iPod Nano. Ichokwadi ndechekuti ini handioni kufanana kwakanyanya, asi kana pfungwa ikauya kwandiri chinoshamisa prototype yeMac Mini ine iPod Nano yakavakirwa mukati.
Mushure mekuedzwa kwakaitwa nevaridzi vane rombo rakanaka remuenzaniso uyu, yakatangwa pamusika. Nebudiriro yakakwana yekutengesa ratove zuva re nhasi tinogona kutaura kuti ndiyo inotengeswa zvakanyanya Wareable. Chinhu chisina kundishamisa nekuti mumaonero angu ndicho chakanakisa Apple chishandiso pasina kupokana. Kana rimwe zuva rakashanda pasina iyo iPhone, ini handizive… handizive…;
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Mifananidzo yepakutanga Apple Watch prototype yakaburitswa
Apple Marina Bay Sands muSingapore inoita kunge ichavhurika munguva pfupi
Mitsara yekugadzira inotanga neApple Watch uye AirPods